RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Arsenal ka gaartay kooxda Crystal Palace ee Premier League… (Maxay ka dhignaayeen goolashii Giroud iyo Iwobi?) – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Arsenal ka gaartay kooxda Crystal Palace ee Premier League… (Maxay ka dhignaayeen goolashii Giroud iyo Iwobi?)
Haaruun January 1, 2017
(London) 01 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kaa kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League kala baxday Manchester City iyo Tottenham, kaddib markii ay 2-0 ku garaacday Crystal Palace oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Emirates, kulan ka tirsan Premier League.
Arsenal ayaa labada oo ay oo ay ku adkaatay kulankan labadii qeybood ee ciyaarta ka kala heshay Olivier Giroud iyo Alex Iwobi.
>- Arsenal ayaa kulankeedii 200-aad ee Premier League ku ciyaartay garoonkeeda Emirates (130 kulan guul ayey gaartay, 47 kulan barbaro ayey gashay, halka 23 kulan looga adkaaday garoonkeeda).
>- Arsenal ayaa guul gaartay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay kulamada London Derbies ee Premier League, halka kulan ee kalena barbaro ayey gashay, iyadoo kaliya hal jeer guuleystay siddeedii kulan ee ay EPL la ciyaartay kooxaha ay isku magaalada ka dhisan yihiin xilli ciyaareedkii in 2015-16 (4 kulan barbaro ayey gashay, halka 3 kale laga adkaaday).
> 13 kulan oo kooxaha uu watay ay Arsenal la ciyaareen Premier League, marnaba guul ma gaarin macallin Sam Allardyce, isagoo barbaro la galay saddex jeer, 10 kulan oo kalena laga adkaaday.
>- Arsenal ayaa ah kooxda kaliya ee aan wali laga adkaan kulan Premier League oo qeybta hore la kala nastay iyadoo hoggaanka u haysa 20 kulan xilli ciyaareedkan.
>- Olivier Giroud ayaa dhaliyey lix gool afartii kulan ee ugu dambeeyey oo uu Premier League kooxda Arsenal garoonka ugu soo bilowday.
>- Alexis Sanchez ayaa ku lug yeeshay 19 gool 19 kulan oo uu Premier League ciyaaray xilli ciyaareedkan, 12 gool waa uu dhaliyey, halka 7 gool oo kale uu caawiye ka ahaa.
>- Alex Iwobi ayaa gacan ka gaystay 5 gool oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, waana in la mid ah inta uu sameeyey Anthony Martial oo ka tirsan Man United, Iwobi waxa uu dhaliyey 2 gool, isagoo caawiyey 3 gool oo kale EPL xilli ciyaareedkan.
>- Arsenal ayaa labo kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League shabaqeeda gool ka ilaashatay iyadoo ku ciyaaraysa garoonkeeda markii ugu horreysay tan iyo bishii may sanadkii 2016.
>- Crystal Palace ayaan shabaqeeda gool ka ilaashan horyaalka Premier League, iyadoo ku ciyaaraysa meel ka baxsan garoonkeeda tan iyo 26 bishii December sanadkii 2015, waana 20 kulan oo xiriir ah.
EPL: Kooxda Arsenal oo soo degtay kaalinta saddexaad ee horyaalka, kaddib markii ay dardartay Crystal Palace, xilli Giroud oo dhaliyey gool cajiib ah… + SAWIRRO
HOR DHAC: Sunderland Vs. Liverpool